Somaliland: “Xisbi Ahaan Waxaanu Rumeysan Nahay In [Amb. Safiina Uu Xadhigiisu] Yahay Shirqool Dhagaraysan Oo Dadkii Uu Maagayey Ay Ka Dembeeyaan” - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Xisbi Ahaan Waxaanu Rumeysan Nahay In Yahay Shirqool Dhagaraysan Oo...
Dawladda Kenya Oo Xabsiga Dhigtay Sarkaal WADDANI Ka Tirsan Oo Socdaal Ku Joogay Nairobi Iyo Xisbigisiisa Oo Jiho U Sameeyey Sababta Uu Xidhan Yahay
“ Ma Garan Karayno Sharciga Meel Ay Kaga Qoran Tahay Qof Safar Dal Ku Ah In La Xidho, [Laakiin]….”
“Xisbi Ahaan Waxaanu Rumeysan Nahay In [Amb. Safiina Uu Xadhigiisu] Yahay Shirqool Dhagaraysan, Cidda Ku Lug Lehina Ay Tahay Dadkii Uu Isagu Maagayey Ee Uu…”
Xoghayaha Cadaaladda Xisbiga Mucaaradka ah ee Waddani Barkhad Jaam ac Xirsi, ayaa cambaareeyey xadhigga Xoghayahii Xisbigaas u qaabbilsanaa arrimaha Carabta Axmed Safiina oo uu sheegeen in habeen lagu xidhay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo uu Safar ku joogay, waxaanu ku eedeeyey masuuliyadda xadhiggaas inay Ganacsato Gacan-saar la leh Xisbiga Kulmiye ka dambeeyeen. Xoghayaha Cadaaladda Waddani oo shalay Warbaahinta qaar kula hadlay Hargeysa, ayaa sheegay in aanay jirin wax fal-dembiyeed ah oo uu galay Safiina. “Waxaannu si weyn u cambaareynaynaa xadhigga loo geystay Xoghayaha Xidhiidhka arrimaha Carabta ee Xisbiga Waddani Ambassador Safiina oo lagu xidhay dalka Kenya, gaar ahaan Caasimadda Nairobi.” Sidaa ayuu yidhi Barkhad. Waxaanu Barkhad oo sii watay hadalkiisa intaas ku ladhay; “Waxaynu la wada soconnaa in Safiina aanay is haynin Muwaaddin Kiiniyaan ah sida aannu warka ku helnay, Shirkad ganacsi oo Kiiniyaan ahna ismay haynin, Hay’ad kale oo dawli ah oo Kiiniyaan ahna ismay haynin, Xisbi Mucaarad ama Muxaafid ah oo Kenya ka dhisanna ismay haynin, wuxuu ahaa Muwaaddin reer Somaliland ah oo dhalasho Sucuudiga ah wata, isla mar ahaantaana ku socday oo Safar ku ahaa Kenya oo hawlo gaara iyo kuwo Xisbi-ba fulinayey.” “Markaa, ma garan karayno Sharciga meel ay kaga qoran tahay Qof Safar dal ku ah in la xidho, waxaannu dawladda Kenya ugu baaqeynaa in ay Muwaaddinkaas xorriyaddiisa u soo celiso oo weli ba Muwaaddin reer Somaliland ah, maaddaama oo Xukuumad xaqiisa iyo Xurmadiisa dhawraysaa aanay jirin.” ayuu yidhi Barkhad. Xoghayaha Cadaaladda Xisbiga Waddani Barkhad Jaamac Xirsi, waxa uu sheegay inay aamminsan yihiin in Dad Ganacsato ah oo Xisbiga Kulmiye dhexdiisa saamayn ku lihi ka dambeeyaan, waxaanu yidhi; “Arrinta kale, xisbi ahaan waxa aanu rumeysan nahay xadhiga muwaadinkaasi in uu yahay shirqool dhagaraysan oo cadaawadeysan oo cadaawad ka baxday xayndaabka Somaliland ah oo meel kasta gelaysa oo Muwaaddinnimadii iyo Qofnimadii aan la ilaalinayn.”
Barkhad waxa uu intaa sii raaciyey; “Cidda ku lug leh ee ficilkaas sameysayna waxaannu leenahay in ay tahay Dadkii uu isagu maagayey ee Ganacsatada ah ee uu ku eedeynaayey inta ay Ganacsigii ka yimaaddeen in ay Siyaasadda faraha la soo galeen oo taladii Xisbiga Kulmiye iyo mudnaanta ba in ay lee xiyeen oo marin-habaabiyeen.”. “Dadkaas ayaannu aamminsannahay in ay xadhiggiisa ka dambeeyeen, waxaanan iyaga ugu baaqeynaa gaar ahaan Xukuumadda in dadka noocaas ah ee Sawirka Ganacsi huwan ee haddana Siyaasadda ku milmay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado, kana adkaysan mayno kana aammusi mayno xaqa oo waannu ku addimaynaa.” Sidaa ayuu yidhi Barkhad.
Barkhad Jaam ac Xirsi
Somaliland: Wakaaladaha Wararka Dunida Oo Si Weyn Wax Uga Qoray Culayska Heshiiska Horumarinta Dekeda Berbera
Deg Deg: Xisbiga Mucaaridka Ah Ee WADDANI Oo Shaaciyey Inay Joojiyeen Wada Shaqayntii Kala Dhaxaysay Guddida Doorashada